အဆိုပါလေသေနတ် paintball ကနေကွာခြားချက်ကဘာလဲ? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
လက်နက်နှင့်ခဲယမ်းမီးကျောက်, လက်နက်များ bola ညာဘက်အလေးချိန်အထိတစ်ဦးကိုမှန်ကန်ရှေ့ပြေးပုံစံမှလုံးဝတူညီဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ခတ်။
သင်ကကျိန်းသေ Kalash စောင့်ရှောက်နိုင်ဘူး PS))))
ပထမ ဦး စွာ airsoft သည် paintball မဟုတ်ပါ။ မကြာခဏအနောက်တိုင်းစာနယ်ဇင်းများတွင် airsoft အဆင့်မြင့်များအတွက် paintball ဟုခေါ်တွင်ပေမယ့်သူတို့သိသိသာသာကွဲပြားသည်။ လက်နက်များ။ paintball marker များနှင့်မတူဘဲစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းများမှလက်နက်များနှင့်ဆင်တူသော airsoft သည်စစ်မှန်သောတိုက်ခိုက်ရေးပုံစံကိုလုံး ၀ တုပသည့်လက်နက်များကိုအသုံးပြုသည်။ အသေးငယ်ဆုံးအသေးစိတ်အချက်အလက်များအရစတိုးဆိုင်၏အလေးချိန်၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ ဖျက်သိမ်းရေးအစီအစဉ်များနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ airsoft သေနတ်များနှင့်ကစားသောအခါ high-capacity သိုလှောင်ရုံများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်၊ paintball အမှတ်အသားများအတွက်တိုက်စက်များ (200,470,600, ဘောလုံး 3000) ။ လက်နက်သတ်မှတ်ချက်။ Airsoft တွင်အချင်း ၆ မီလီမီတာရှိသောတည်ငြိမ်သောဘောလုံးကိုသုံးသောကြောင့် hits များ၏တိကျမှုသည်မြင့်တက်လာသည်။ Hop-Up စနစ်သည်အလွန်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ plays မှပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်စစ်တပ်လက်နက်၏စည်တွင်ရိုင်ဖယ်သေနတ်နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘောလုံးကိုလိမ်လည်ခြင်းသည်၎င်း၏လမ်းကြောင်းကိုပိုမိုတည်ငြိမ်စေပြီးတိကျမှန်ကန်မှုကိုတိုးစေသည်။ ယခုပစ်လွှတ်လိုက်သောဘောလုံးသည် "ကျပန်း" လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်မည်သို့ပျံသန်းသည်ကိုကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်တော့ပါ။ ၎င်းသည်မည်သည့်နေရာသို့သွားမည်ကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။ သင်ရည်ရွယ်သောပစ်ခတ်မှုဖြစ်နိုင်ချေရှိသောကြောင့်သင်ကျပန်းမဟုတ်ဘဲရန်သူကိုသာရည်ရွယ်သည်။ လက်နက်များ၏ Range နှင့်အလုပ်။ အခြေခံဗားရှင်းမှာတော့ airsoft gun ဟာသာမန် paintball marker ထက်ပိုမိုကျယ်ပြန့်တဲ့ပမာဏကိုပေးနိုင်တယ်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ airsoft မှာအကွာအဝေးမှာလည်းကန့်သတ်ချက်ရှိပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ballball ရဲ့ဘောလုံးဟာ paintball ထက်များတယ်။ Airsoft သေနတ်များသည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆို၊ မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုရာသီဥတုအခြေအနေအောက်တွင်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မြင့်မားသောသေနတ်ပစ်သည့်ဆောင်ပုဒ်နှင့်မကိုက်ညီပါ၊ ဘောလုံးများသည်ပင်စည်ထဲမ ၀ င်ပါ၊ ဈေးဆိုင်များမဖွင့်ရ၊ ထို့အပြင် airsoft ရှိလက်နက်များ၏စွမ်းအားကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ စည်မှထွက်ခွာစဉ်ကန ဦး ဘောလုံး၏အမြန်နှုန်းကို6m / s သို့ရောက်စေသည်၊ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအားကောင်းသောလက်နက်ကို Minsk airsoft club မှပြုလုပ်သောဂိမ်းများတွင်အသုံးမပြုသည်။ တစ် ဦး ကပစ္စတို - MP200 ချေမှုန်းရေးစက်သေနတ်, Kalashnikov ချေမှုန်းရေးရိုင်ဖယ်, M5, G16, etc - ရှိပြီးသား airsoft သေနတ်များ၏စာရင်းအလွန်ကြီးမားသည်နှင့်တည်ဆဲတိုက်ခိုက်ရေးလက်နက်တစ်ခုလုံးကိုနီးပါးထပ်ခါတလဲလဲ။ ဂိမ်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောစည်ပေါင်းများစွာကိုသင်ယူနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ စက်ထဲသို့သေနတ်တစ်လက်ကိုဒုတိယလက်နက်အဖြစ်သင်ခေါ်ဆောင်နိုင်သည်။ စစ်မှန်သောစစ်တိုက်ခြင်းအခြေအနေများနှင့်နီးစပ်ခြင်း - ဂိမ်းသည်တာယာများသို့မဟုတ်ဖောင်းပွသောအမိုးအကာများအကြားရှိပလက်ဖောင်းငယ်လေးတွင်ကစားမထားပါ။ သူမသည်အထူးတပ်ဖွဲ့များ၏လေ့ကျင့်ရေးနေရာများအပါအ ၀ င်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုအချိန်မရွေးသွားနိုင်သည်။ စည်းမျဉ်းများကွဲပြားမှု။ Airsoft တွင်ဂိမ်းသည်ရိုးသားမှုအတွက်ကစားသည်၊ ထိခိုက်နစ်နာသောကစားသမားသည်သင်္ကေတပေါ် မူတည်၍ အမှတ်အသားပြီးနောက်ချက်ချင်း (သို့) အချိန်အကြာတွင်ဂိမ်းထဲသို့ ၀ င်နိုင်သည့်“ carrion” သို့သွားရမည်။
လေသေနတ်မတရားသူကြီးများနှင့်ခုံသမာဓိလူကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ရှေ့မှာ task ကိုဖြည့်စွက်ရန်ကစားသမားများဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ဒီဂိမ်းဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ ဒါဟာအားလုံးတတိယအင်အားစု၏စီရင်ချက်အပေါ်ရေတွက်မထားဘူး, ဒါပေမယ့်တရားရုံးပိုပြီးအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်စည်းကမ်းဖြစ်ရန်အတွက်ကစားသမားမြင့်တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်နာကျင်? ဘောလုံးကိုလေသေနတ်အတွက် hit အကြောင်းကို 0.2 m / s ၏မြန်နှုန်းမှာပျံသန်း 100 ဂရမ်အလေးချိန်ပလပ်စတစ်ဘောလုံးကိုကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ဒါကြောင့်နာကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘောလုံးကို၏ Uchitavaya သေးငယ်တဲ့အလေးချိန်လေသေနတ်သို့ရတဲ့အများကြီးလျော့နည်းနာကျင် paintball ထက်ကြောင်းကိုနားလည်ရန်ခက်ခဲသည်မဟုတ်။ သဘာဝကျကျ, ကိုယ်ခန္ဓာ၏ပွင့်လင်းဒေသများအတွက်သဲလွန်စတွေကိုရှင်းလင်းရှိနေဆဲ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကအရမ်းမြန်ဆန်စွာရှိပါသည်။ လူဘယ်နှစ်ယောက်အသင်းအတွက်ဖြစ်သင့်သလဲ အသတ်မရှိ။ ကုမ္ပဏီဖြစ်သော်လည်း, သင့်အလိုဆန္ဒ, ဇာတ်ညွှန်း, သို့မဟုတ်ကစားဧရိယာ၏အရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပါသည်။
သူတို့ဘုံရှိဘယျအရာ? က adrenaline ရဲ့အဲဒီနှစျခုဂိမ်းများကိုမှီဝဲသောတစ်ခုတည်းသောအရာ။ ပေမယ့်, ဖြစ်ကောင်း, လေသေနတ်ဂိမ်းနေဆဲမှားယွင်းနေသည်ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရ။ ဒါဟာဘဝကိုပိုတဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်
သငျသညျစစ်မှန်ဖြစ်ဘို့ငါသိပါမနေပါနဲ့ပိုပြီးငါဤအမျိုးအစားများအပေါ်ဘာမျှမရှိတယ် ... ငါ့အ inyormatsiya မျှော်လင့်ပါတယ်
Posted in, ကွန်ပျူတာမရှိဘဲအားကစားပြိုင်ပွဲ
64 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,246 စက္ကန့်ကျော် Generate ။